विश्वकपको हारपछि मेस्सी कहाँ दिन काट्दै छन् ?
२०७५ साउन ४ गते ०:५०
एजेन्सी । आइतबार सम्पन्न भएको रसिया विश्वकमा खराब प्रदर्शन गर्दा अर्जेन्टिना पराजित भयो । यो टिमका मुख्य आशा गरिएका खेलाडी थिए स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी । कप्तान मेसीको पनि जादू नचल्दा दुई पटकको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना अन्तिम ८ मा नपुग्दै घर फिर्ता भयो ।...
कथाले मागेपछी जे दिन पनि तयार छु : तिर्सना बुढाथोकी
२०७५ साउन २ गते १२:४३
हरेक समयमा विभिन्न कारणले चर्चाका साथै विवादमा आउन माहिर मानिने मोडल तिर्सन बुढाथोकी पछिल्लो समयमा चलचित्र सगैं केहि म्युजिक भिडियोको छायांकनमा समेत व्यस्त छिन् । बलिउडकी पुनम पाण्डे समेत भनेर कहलिएकी पत्रकारले लेख्ने गर्छन र तिर्सनाले पनि बेलाबेलामा आफ्नै नग्न फोटोसुट गरेर पनि विवादमा...
‘सेक्सी’ पुनम पाण्डेले भनिन्– धन्यवाद नेपाल प्रहरी !
२०७५ साउन १ गते ०:२३
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको फाइनलका लागि डेजाभु क्लव दरबारमार्गमा आएकी भारतीय ‘सेक्सी’ मोडल पुनम पाण्डेले नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद भनेकी छन् । दरबारमार्ग प्रहरीका कारण अनिश्चित बनेको उनको फाइनलको कार्यक्रम अन्तिम समयमा प्रशासनको अनुमतिका कारण चलेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत धन्यवाद भनेकी हुन् । ‘नेपाल...
प्रियंकाले भनिन्, ‘साथीहरु, स्याम्पेन तोड्नुहोस्ः म आफ्नो थर परिवर्तन गर्दैछु’
२०७५ असार ३२ गते २३:४८
नेपाली चलचित्रकी निकै व्यस्त नायिका प्रियंका कार्की र उनका प्रेमी नायक आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशीले आफ्नो १६ महिने प्रेम सम्बन्धलाई शनिबार इन्गेजमेन्ट गरेर थप कसिलो बनाएका छन् । आफ्नो परिवारको निकट सदस्यको सहभागितामा यी दुईले आफ्नो इन्गेजमेन्ट निकै गोप्य तरिकाले गरेका थिए । मिडियालाई...
आयुष्मान र प्रियंकाबीच इन्गेजमेन्ट, बिहे अर्को वैशाखमा !
२०७५ असार ३२ गते ११:१८
केही वर्षदेखि प्रेममा रहेका अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । शनिबार सामान्य पारिवारिक जमघटबीच दुवैले औँठी साटेका हु्न् । उनीहरुबीच चलचित्र ‘कथा काठमाण्डू’ को छायांकनदेखि प्रेम बसेको थियो । आफूहरुबीचको प्रेम सार्वजनिक गरेका दुवैले अन्तत: जीवनसाथीकारुपमा अघि बढ्ने...
आयुष्मान र प्रियंकाले गरे इन्गेजमेन्ट
२०७५ असार ३० गते २१:४०
काठमाडौँ । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले नायक आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशीसँगको डेढ वर्षयताको अफयेरलाई विबाहमा परिणत गर्न लागेकी छिन् । शनिबार प्रियंका र आयुष्मानका आफन्त र निकटस्थहरुको सहभागितामा यी दुईबीचको इन्जेगमेन्ट सम्पन्न भएको छ । अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले प्रियंका र आयुष्मानको शनिबार इन्गेजमेन्ट भएको रातोपाटीलाई...
प्रियंका कार्की किन देखिन्छिन् छोटो भूमिकामा ?
२०७५ असार २८ गते ३:०९
काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्की पछिल्लो समय निकै चर्चामा छिन् । एक पछि अर्को चलचित्र हिट भएपछि उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निकै चर्चित भएकी हन् । प्रियंका दर्शकहरुले रुचाइएको नायिकामा पर्दछिन् । उनी हट एण्ड बोल्ड नायिकाको रुपमा पनि चिनिन्छिन् । २००५ को मिस...
पत्रकार ऋषि धमला पत्नी एलिजाको चलचित्र ‘अनुराग’ को पोस्टर सार्वजनिक !
२०७५ असार २७ गते १४:५०
काठमाण्डौ । सञ्चारकर्मी ॠषि धमला पत्नी एलिजा गौतमद्वारा अभिनित तथा निर्मित चलचित्र ‘अनुराग’को पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । केहि समय अगाडि नै चलचित्रको गीत एउटा गीत रिलिज गरिसकिएको थियो। उक्त गीतले युटुबमा राम्रो भ्यू पनि पाएको थियो। अहिले सार्वजनिक भएको चलचित्रको पोष्टरमा एलिजा र...
शाहरुखकी छोरी सुहाना विदेशी युवकको प्रेममा रहेको हुनसक्ने आशंका
२०७५ असार २४ गते २२:४९
एजेन्सी । बलिउड स्टार शाहरुख खानको छोरी सुहाना खान विदेशी युवकको प्रेममा रहेको हुनसक्ने आसंका गरिएको छ । उनले एक विदेशी नागरिकलाई अंगालोमा बेरिएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि यस्तो आसंका गरिएको हो । यसअघि सुहानाले आफ्ना केटी साथीहरुसँग मोजमस्ति गरिरहेका तस्वीरहरु सार्वजनिक हुने...
किन मागिन् मनिषा कोइरालाकी आमाले ऋषि कपुरको नम्बर ?
२०७५ असार २४ गते १८:१०
एजेन्सी । बक्स अफिसमा धमाका मच्चारहेको फिल्म सञ्जुमा संजय दत्तको भूमिका निभाउने नायक रणबीर कपुरको कामको निकै चर्चा भइरहेको छ । हुबहु संजय दत्तलाई पर्दामा उतार्न सकेको भन्दै रणबीरको चौतर्फी तारिफ भइरहेको हो । फिल्ममा संजय दत्तकी आमा नरगिसको भूमिका निभाएकी नायिका मनिषा कोइरालाकी...